Dambudziko reApple "Kutanga gore nerutsoka rwerudyi" yatoonekwa | Ndinobva mac
Apple's "Kutanga gore kubva kurutsoka rworudyi" dambudziko rave kuoneka
Mavhiki mashoma apfuura takataura nezve dambudziko kune vashandisi veApple Watch umo iyo Cupertino femu inotikurudzira kutanga gore idzva nekuita kwemuviri. Dambudziko rakadzokororwa gore rega rega rine zita rekuti: «Tanga gore kurudyi tsoka» uye masvondo mashoma mushure mekuziviswa kwayo inotanga kurova mawatch evashandisi.
Zvine musoro, iyo ziviso yatosvika kwandiri paApple Watch kuti utange gore rizere nekurovedza muviri uye zviri pachena kuti rimwe rematambudziko anokwanisa kuitwa nevanhu vazhinji pakuita zviitiko zvemuviri nekuda kwenguva inotora kuzviita.
Kune mazuva manomwe akateedzana echiitiko atinofanira kuita vhara mhete dzese nhatu kwemazuva manomwe akateedzana. Dambudziko ratozivikanwa nevazhinji vashandisi asi zvirokwazvo avo vane Apple Watch nyowani kana vakamirira SSMM Los Reyes Magos, vachada kutanga gore nenzira huru. Unogona kutanga svondo rekutanga remwedzi waNdira kana rechipiri asi usanonoka nguva yakawandisa sezvo ari mazuva manomwe akateedzana uye mwedzi unomhanya chaizvo.
Kune rimwe divi, iyo mibairo mukuwedzera kune chiyero chehutano chatichaenda kutora ruoko rwakanaka rwezvinamirwa zvekushandisa mumameseji uye menduru inoenderana mune yedu yekuvhara mukati meye mashoma edition matambudziko anoonekwa zvese pane wachi uye mune Fitness app ye iPhone yedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple's "Kutanga gore kubva kurutsoka rworudyi" dambudziko rave kuoneka
Apple TV + inoda kudzokorora naMariah Carey gore rinouya
Apple inogamuchira gore idzva kana "Shōgatsu" anobva kuJapan